Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: Burma Civil War ကချင်တပ်မတော်နဲ.သိန်းစိန်းတပ်မတော်တို.တိုက်ပွဲသတင်း
Burma Civil War ကချင်တပ်မတော်နဲ.သိန်းစိန်းတပ်မတော်တို.တိုက်ပွဲသတင်း
ကချင်ပြည်နယ် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် ဂါးရာယန်နှင့် ဆမ်ပိုင် အထက် ကေအိုင်အေအစိုးရ တပ်ရင်း (၃) နယ်မြေဖြစ်သော ၀ူထောင်ဘွမ်ဘက်တွင် ဗမာစစ်အစိုးရ စစ်တပ်အင်းအား အများအပြားထိုးစစ်ဆင်လာမှုကြောင့် ကေအိုင်အေမျိုးချစ် ရဲဘော်များနှင့် အပြင်းအထန် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဒီဇင်ဘာလ (၅၊၆) ရက်များတွင် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃) ပါတ်ဝန်းကျင် လဂတ် တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ဗမာအစိုးရစစ်တပ်မ (၁၀၀) ကျော်ကျဆုံးပြီး အများအပြားဒဏ်ရာရရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ကေအိုင်အေဘက်မှ မျိုးချစ်ရဲဘော် (၄) ဦး ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းဆက်လက်သတင်းရရှိပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ.။
ကေအိုအေတပ်မဟာ ၃ လက်အောက်ခံကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၁၅)နဲ.ဗမာတပ်တို.အကြားနမ်းဆန်းယန်တဝိုက်မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးဗမာစစ်တပ်ဘက်မှအင်းအားတို.ချဲ.လာသဖြင့်ကေအိုင်အေဘက်ကလည်းခုခံသည့်အနေနဲ.ကေအိုင်အေတပ်ရင်း ၁၅ ကိုကူညီရန်လိုင်ဇာဌာနချုပ်မှစစ်ကူးများထပ်ပို.လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
There was daily fighting between KIA 15th Battalion under KIA 3rd Brigade and Burma soldiers at KIA 15th Battalion control area. KIA Head Quarter in Laiza dispatch more KIA troop to support KIA 15th battalion forces. Burma soldiers are gathering around Nam San Yang village as well as Burma army soldiers heading toward Sam Kawng and Hpalap Bum village to renew its invasion operation against KIA control areas and Kachin Land.